သတင်းကောင်း - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာချီဘုရားကျောင်း
ဆောင်းပါး > ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို > သတင်းကောင်း
ဝံဂေလိတရား - သတင်းကောင်း!
လူတိုင်းတွင်အမှားအမှန်နှင့်ဆိုင်သောအကြံဥာဏ်ရှိကြသည်။ လူတိုင်းအမှားတစ်ခုခုပြုလုပ်မိကြသည်။ “ အမှားပြုမိခြင်းသည်လူသားဖြစ်သည်” ဟုလူသိများသည့်နယပုံပြင်ကဆိုသည်။ လူတိုင်းဟာတစ်ချိန်ချိန်မှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုစိတ်ပျက်စေတယ်၊ ​​ကတိတစ်ခုကိုချိုးဖောက်ပြီးတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုထိခိုက်စေတယ်။ လူတိုင်းအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်။
ဒါကြောင့်လူတွေဟာဘုရားသခင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ သူတို့သည်ကြည်လင်သောသြတ္တပ္ပစိတ်နှင့်ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌မရပ်တည်နိုင်သည်ကိုသိသောကြောင့်သူတို့သည်တရားစီရင်ရာနေ့ကိုမလိုလားကြပါ။ သူတို့ကသူ့စကားကိုနားထောင်သင့်တယ်၊ မင်းကိုရှက်တယ်၊ အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်
သူတို့ရဲ့ကြွေးမြီကိုဘယ်လိုပြန်ဆပ်နိုင်မှာလဲ။ ဝိညာဏ်ကိုမည်သို့သန့်စင်နိုင်သနည်း။ "ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည်ဘုရားသခင့်ဂုဏ်တော်ဖြစ်သည်" ဟူသောအဓိကစကားလုံးကိုပိတ်ထားသည်။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသည်။
များစွာသောသူတို့သည်ဤစကားကိုပြောဆိုကြသော်လည်းဘုရားသခင်ကသူတို့၏အက်စ်ကိုပြုလုပ်ရန်ဘုရားသခင်အလုံအလောက်ရှိသည်ဟုမယုံကြည်ကြပါ။üခွင့်လွှတ်ခြင်း nd မင်းကအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေတုန်းပဲ။ သူတို့သည်ဘုရားသခင့်အသွင်အပြင်နှင့်တရားစီရင်ရာနေ့ကိုကြောက်ရွံ့ဆဲဖြစ်သည်။
သို့သော်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အရင်၌ထင်ရှားခဲ့သည်။ သူသည်အပြစ်တင်ရန်မဟုတ်ဘဲကယ်တင်ရန်လာခဲ့သည်။ သူသည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းသတင်းစကားကိုယူဆောင်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့ခွင့်လွှတ်ခံရနိုင်ကြောင်းအာမခံရန်လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံခဲ့သည်။
သခင်ယေရှု၏သတင်းစကားသည်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အပြစ်ရှိကြောင်းခံစားရသူများအတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင့လူသားဖြစ်သောသခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်၌အပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့သည်။ စိတ်နှိမ့်ချသူအားလုံးကိုယေရှုခရစ်၏ospelဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ရန်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသည်။
ဒီသတင်းကောင်းလိုတယ်။ ခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားသည် စိတ်၏ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့် ကိုယ်ပိုင်အောင်ပွဲတို့ကို ယူဆောင်လာစေသည်။ စစ်မှန်သော ဧဝံဂေလိတရား၊ သတင်းကောင်းသည် ခရစ်တော်ဟောကြားခဲ့သော ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်သည်။ တမန်တော်များ ဟောကြားခဲ့သည့် ဧဝံဂေလိတရားမှာ ယေရှုခရစ် (သခင်ယေရှုခရစ်)၊1. ကော။ 2,2) ခရစ်ယာန်တို့၌ ယေရှုခရစ်သည် ဘုန်းကြီးခြင်းမျှော်လင့်ချက် (ကော. 1,27) သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ချက်နှင့် လူသားများအတွက် ရွေးနှုတ်ခြင်းသတင်းစကားသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည်သူ၏ချာ့ချ်အားဤသတင်းစကားကိုကြေငြာရန်တာဝန်ပေးခဲ့သည်üသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဤလုပ်ငန်းကိုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ ကောရိန္သုမြို့သားများထံရေးသောစာ၌ရှင်ပေါလုသည်မိမိ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုပေးခဲ့သော the ၀ ံဂေလိတရားကိုဤသို့ဖော်ပြထားသည်üငါဟောပြောသောtheဝံဂေလိတရားကိုသင်တို့အားငါကြားပြောသောသူသည်သင်တို့ကိုလက်ခံ၏။ သင်တို့သည်လည်းတည်ကြည်ကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါဟောပြောသောtoဝံဂေလိတရားကိုသင်တို့သည်တည်ကြည်လျှင်၊ အချည်းနှီးယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ရရှိသောအရာအားလုံးကိုသင်၏လက်သို့အပ်နှံခြင်းဖြစ်သည်။ünd ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီသေဆုံးသွား; သင်္ဂြိုဟ်ပြီးမှ၊ ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်းသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်တော်မူ၏။ တကျိပ်နှစ်ပါးသောသူတို့သည်မြင်ရကြ၏။ ထို့နောက်သူသည်fထက်ပိုသည်ထင်ရှား။ ,üငါးရာ Brüရုတ်တရက်၊ အများစုမှာ ယခုအချိန်အထိ ကျန်ရှိနေသော်လည်း အချို့မှာ အိပ်ပျော်သွားကြသည်။ ထိုအခါ ယာကုပ်သည် ထင်ရှား၍၊ တမန်တော်အပေါင်းတို့အား၊ အဆုံး၌မူကား၊ အချိန်အခါမဟုတ်သော ဖွားဖက်တော်ဖြစ်သကဲ့သို့ ငါ့အားလည်း ထင်ရှားစေတော်မူ၏။1. ကော ၁5,1-8 ELB)။
ရှင်ပေါလုက“ အရာခပ်သိမ်းတို့ထက်” သခင်ယေရှုသည်မေရှိယ (သို့) ခရစ်တော်ဖြစ်သည်၊üကြိမ်မြောက်သေဆုံးသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းနှင့်ထပ်မံထခဲ့သည်။ လူအများကခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုမည်သူမဆိုသံသယဝင်သင့်ကြောင်းသက်သေခံနိုင်ကြောင်းကိုလည်းသူထောက်ပြခဲ့သည်။
ရှင်ပေါလုက“ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းအားဖြင့် g ၀ ံဂေလိတရား” ဖြစ်သည်ဟုရှင်းလင်းစွာပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာပေါလုကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအရာများနှင့်အခြားသူများထက်“ အခြားအရာများ” ကိုသာလွှဲပြောင်းပေးရန်ဖြစ်သင့်သည်။
ငါတို့ရရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုပေါလုနှင့်အခြားတမန်တော်များရရှိထားသည့်အရာသည်အခြားအရာအားလုံးထက်သာလွန်သည် -“ ငါတို့၏ခရစ်တော်အတွက်ခရစ်တော်” ဖြစ်သည်။ünd ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီသေဆုံးသွား; သင်္ဂြိုဟ်ပြီးမှ၊ ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်းသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်တော်မူ၏။
ကျမ်းစာပါအခြားသွန်သင်ချက်အားလုံးသည်ဤအခြေခံအမှန်တရားများအပေါ်အခြေခံသည်။ ငါတို့၏ S. အတွက်ဘုရားသခင်၏သားတော်သာüသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောကြောင့်သာသူသည်ယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြင့်သူ၏ပြန်လာခြင်းနှင့်ထာဝရအမွေအနှစ်ကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်ယောဟန်ကဤသို့ရေးသားခဲ့သည် -“ လူ၏သက်သေကိုယုံရလျှင်၊ ဘုရားသခင်၏သက်သေတော်ကို သာ၍ ယုံဘွယ်ရာအကြောင်းရှိ၏။ ယခုဆိုခဲ့ပြီးသောသက်သေကား၊ ဘုရားသခင်သည်မိမိသားတော်၏အကြောင်းကိုသက်သေခံတော်မူချက်ဖြစ်သတည်း။ ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်၊ ဘုရားမယုံဘူး၊ügner; ဘုရားသခင်သည်မိမိသားတော်၏အကြောင်းမှာသက်သေခံတော်မူသောစကားတော်ကိုထိုသူသည်မယုံဘဲနေ၏။
“ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးတော်မူကြောင်း သက်သေဖြစ်၏၊၊ ထိုအသက်သည် သားတော်၌ရှိ၏ ။ သားတော်ကိုရသောသူသည် အသက်ကိုရ၏။ ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​သား​တော်​မ​ရှိ​သော​သူ​သည် အသက်​ကို​မ​ရ​ပါ။"1. ဂျို 5,9- ၁၂)။
တချို့လုပ်နိုင်တယ် üကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်အပေါ်အရှိန်မြှင့်သော်လည်းခက်ခဲသောအချိန်ရှိ füယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းတရား၏အဓိကသတင်းစကားကိုစေ့ဆော်ရန်။ ဘုရားသခင်သည်ခရစ်ယာန်များအားလက်ဆောင်များအတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာများကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးအခြားသူများကိုရောင်းချရန်တာဝန်ပေးခဲ့သည်üသူတို့လည်းဒီလက်ဆောင်ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
ရှင်ပေါလုသည်တမန်တော်များ၏လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုတပ်မှူးကော်နေလိထံပြောပြသောအခါသူက“ လူတို့အားဟောပြောခြင်းငှာ၎င်း၊ ရှင်သောသူတို့ကို၎င်း၊ သေသောသူတို့ကို၎င်းတရားစီရင်ခြင်းငှါ၎င်း၊ ပရောဖက်၏နာမအားဖြင့်သူ့ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့၊üခံယူသင့်သည်” (တ 10,42-43) ။
၎င်းသည်အဓိကသတင်းစကားဖြစ်သည်။ toဝံဂေလိတရားကိုဟော ပြော၍ လူများတို့အားကြားပြောလေ၏ üအသက်ရှင်သောသူ၊ သေသောသူနှင့်၎င်း၊ ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အဘို့အလိုငှါ၎င်း၊üနာမတော်အားဖြင့်အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူပါ။
လုကာကသူ့ J ကိုရှိခဲ့ကြောင်းရေးသားခဲ့သည်üသူသည်ကောင်းကင်သို့မတက်မှီဗဟို G သို့သွားသည်üသူသည်သူ၏သတင်းစကားမှန်ကန်ကြောင်းကိုဤသို့ပြန်ပြောပြသည် -“ ထိုအခါကျမ်းစာကိုနားလည်စေခြင်းငှါတပည့်တော်တို့၏ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူလျှင်၊ ခရစ်တော်သည်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌သေခြင်းမှထမြောက်ရမည်။ နောင်တရခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ရမည်။ [နောင်တ] S ကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းüလူအမျိုးမျိုးတို့တွင်ကြိမ်မြောက်။ ယေရုရှလင်မြို့မှ စ၍ ထိုမြို့၌နေကြလော့ür သက်သေ” (လု. ၂4,45-48) ။
တမန်တော်များကသခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ထက်၊ သမ္မာကျမ်းစာပါအကြောင်းအရာများကိုအဘယ်သို့နားလည်သင့်သနည်း။üဖွင့်ပြီလား တစ်နည်းပြောရလျှင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှနားလည်သဘောပေါက်ရန်အဓိကနှင့်အရေးအပါဆုံးအမှန်တရားကိုသခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်။
“အခြားသူ၌ ကယ်တင်ခြင်း မရှိ၊ ငါတို့ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်သော ကောင်းကင်အောက်၌ လူတို့အား ပေးသော အခြားသော နာမတော်လည်း မရှိပါ။” ပေတရု ဟောကြားခဲ့သည် (တမန်တော်များ 4,12).
သို့သော်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သတင်းကောင်းတွင် Init ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သတင်းကောင်းကိုဟောပြောတော်မူသည်မဟုတ်လော။ နတ်üအစစ်အမှန်
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သော the ၀ ံဂေလိတရားသည်ပေါလု၊ ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကွာခြားပါသလား üယေရှုခရစ်၌ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဟောပြောသလား။ အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး!
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုနားလည်ကြပါစို့ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ထာဝရအသက်ကိုရရှိခြင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းကိုခံစားခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သောကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသည်သေစေနိုင်သောအက်စ်မှကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။üကြိမ်မြောက်။
သခင်ယေရှု၌ထာဝရအသက်ရှိ၏။ ထာဝရအသက်သည်အက်စ်၏ခွင့်လွှတ်မှုလိုအပ်သည်üကြိမ်မြောက်။ ထိုအခါ S ၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းünde, သို့မဟုတ်မျှတမှု, သာယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ယေရှုသည်တရားသူကြီးနှင့်ကယ်တင်ရှင်နှစ် ဦး စလုံးဖြစ်သည်။ သူလည်းဘုံ၏ဘုရင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၏gဝံဂေလိတရားသည်ယေရှုခရစ်၌ကယ်တင်ခြင်း၏ospelဝံဂေလိတရားဖြစ်သည်။ ယေရှုနှင့်တမန်တော်များသည်တူညီသောသတင်းတရားကိုဟောပြောခဲ့ကြသည်။ ယေရှုခရစ်သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ပြီးကယ်တင်ခြင်း၊ ရွေးနှုတ်ခြင်း၊ ထာဝရအသက်နှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုသည် တမန်တော်များကို နားလည်သဘောပေါက်စေသည့်အတိုင်း ဓမ္မဟောင်းပရောဖက်ပြုချက်များကို နားလည်နိုင်စေရန် အာရုံများပွင့်လာသောအခါ (လု ၂၊4,45) ပရောဖက်များ၏ အဓိကသတင်းစကားမှာ ယေရှုခရစ်ဖြစ်သည် (တမန်တော်များ၏တမန်တော်များ 10,43).
ဆက်လုပ်ကြရအောင် ယောဟန်ကဤသို့ရေးသားခဲ့သည် -“ သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏။ သားတော်ကိုပယ်သောသူမူကားအသက်ကိုမတွေ့ရ။ ထိုသူ၏အပေါ်၌ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်တည်နေသည်။ üသူ့အပေါ်မှာ” (ယော. 3,36) အဲဒါက ရှင်းလင်းတဲ့ ဘာသာစကားပါ။
သခင်ယေရှုက "... ငါသည် လမ်းခရီး၊ သမ္မာတရားနှင့် အသက်ဖြစ်သည်၊ အဘယ်သူမျှ ငါ့အားဖြင့် ခမည်းတော်ထံသို့ မရောက်။" (ယော၊ ၁။4,6) ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ လုံး၀ နားလည်သဘောပေါက်သောအရာüssen, ယေရှုခရစ်မရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သည်ခမည်းတော်ထံသို့မလာ၊ ဘုရားသခင်ကိုမသိ၊ ထာဝရအသက်ကိုအမွေမခံနိုင်သကဲ့သို့ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်နိုင်ပါ။
ကောလောသဲမြို့သားများထံရေးသောစာတွင်ပေါလုက“ သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောခမည်းတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာချီးမွမ်းကြလော့üသန့်ရှင်းသူတို့၏အမွေကိုလင်းစေတော်မူ၏။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမှောင်မိုက်တန်ခိုးမှကယ်တင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ချစ်သောသားတော်၏နိုင်ငံတော်သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ünden"(col. 1,12- ၁၂)။
သူတော်စင်များ၏အမွေ၊ အလင်းတော်၊ သားတော်၏နိုင်ငံတော်၊ ရွေးနုတ်ဖိုးနှင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအကြောင်းတို့ကိုသတိပြုပါ။ütheဝံဂေလိတရားတည်းဟူသောသမ္မာတရားကိုကြားပြောခြင်းငှါ၊
အခန်းငယ် ၄ တွင်ရှင်ပေါလုက“ [ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သော [ကောလောသဲအသင်းသားများ၏] ယုံကြည်မှုနှင့်သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့အပေါ်၌ရှိသောသင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ”) ကိုပြောခဲ့သည်။ သူကထိုယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် "မျှော်လင့်ခြင်း ... မှထွက်ပေါ်လာ" ကြောင်းရေးသားခဲ့သည်ür ကောင်းကင်ဘုံ၌ သင့်အတွက် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ သမ္မာတရားတည်းဟူသော နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် သင်တို့ဆီသို့ ရောက်သော ဧဝံဂေလိတရားကို သင်တို့သည် ရှေ့တော်၌ကြားရပြီ” (အခန်းငယ် ၅-၆)။ တဖန် ဧဝံဂေလိတရားသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၌ ထာဝရကယ်တင်ခြင်းမျှော်လင့်ချက်၏ဗဟိုချက်၌ သခင်ယေရှု၊ ဘုရားသခင်၏သားတော် ခရစ်တော်သည် ငါတို့အားဖြင့် ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရ၏။
အခန်းငယ် ၂၁ မှ ၂၃ တွင်ရှင်ပေါလုက“ မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူတို့ကိုရန်သူကဲ့သို့မှတ်။ ၊ သင်တို့ကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေ။ ၊ အပြစ်ကင်းခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေမည်အကြောင်း၊ ယုံကြည်ခြင်း၌တည်နေကြလော့üမြဲမြံခိုင်ခံ့မြဲမြံစေခြင်းငှါကြိုးစားကြလော့။ မိုyou်းကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောဝေနေယျသတ္တဝါတို့အားဟောပြောသဖြင့်၊ ငါပေါလုသည်မိမိအစေခံကျွန်ဖြစ်၏။
အခန်းငယ် ၂၅ မှ ၂၉ ၌ရှင်ပေါလုသည်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနှင့်၎င်း၊üကြိမ်မြောက်။ သူကဤသို့ရေးသားခဲ့သည် -“ သင် [ဘုရားရှိခိုးကျောင်း] ကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်အပ်နှင်းထားသောရုံးမှကျွန်များဖြစ်လာသည်။ ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြွယ်ဝစွာဟောပြောသင့်ကြောင်း၊ ရှေးအချိန်ကတည်းကပင်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖုံးကွယ်ထားသည့်နက်နဲသောအရာဖြစ်သော်လည်းယခုထင်ရှားလျက်ရှိသည်။ ဤနက်နဲသောအရာ၏ဘုန်းစည်းစိမ်ကားအဘယ်မျှလောက်ကြီးသည်ကို၎င်း၊ သင်တို့သည်သိစေခြင်းငှါ၎င်း၊üလူခပ်သိမ်းတို့ကိုနှိမ့် ချ၍ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြကုန်အံ့။ Dafürmüငါ၌ကိုယ်တန်ခိုးကိုထင်ရှားစွာပြ၏။
ဧဝံဂေလိတရားတစ်ခုလုံးသည် ယေရှုခရစ်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏သားတော်အဖြစ် သူ၏အထောက်အထားနှင့် သူ၏အမှုတော်အကြောင်းဖြစ်သည်။ (ယော. 3,18အသက်ရှင်သောသူနှင့် သေသောသူတို့ကို တရားသူကြီးအဖြစ်၊2. တိ 4,1ခရစ်တော်အဖြစ်၊ (တမန်တော် ၁7,3ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်၊2. တိ၊ ၁း၁၀) ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း (ဟေဗြဲ၊ 4,14) F အဖြစ်üစပီကာ (1. ဂျို 2,1ရှင်ဘုရင်တို့၏ ဘုရင်နှင့် သခင်တို့၏သခင် (ဗျာဒိတ် ၁၇း၁၄)၊ တောင်ယာများစွာတို့တွင် သားဦးအဖြစ်၊üdern (ရောမ။ 8,29သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ (ယော. ၁5,14-15) ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝိညာဉ်များကို ထိန်းကျောင်းသူအဖြစ်၊1. ပေတရု။ 2,25) ဘုရား၏သိုးသငယ်အဖြစ်၊üလောကမှ နှုတ်ဆောင်သွားသည် (ယော. 1,29)fအဖြစ်ür ငါတို့အား ယဇ်ပူဇော်သော ပသခါသိုးသငယ်၊1. ကော။ 5,7) မျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးမတိုင်မီသားဦးကဲ့သို့ (ကော. 1,15အသင်းတော်၏ဦးခေါင်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အစအဦးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သေခြင်းမှမွေးဖွားသောသားဦးလည်းကောင်း (အခန်းငယ် ၁၈)၊ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်နှင့် ကိုယ်တော်ဖြစ်ခြင်း၏ပုံသဏ္ဍာန်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းအဖြစ် (ဟေဗြဲ)။ 1,3ခမည်းတော်၏ ဗျာဒိတ်တော်အဖြစ်၊ (မ. 11,27သမ္မာတရားနှင့် အသက် (ယော. ၁)၊4,6) Tür (ယော။10,7).
ဧဝံဂေလိတရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို အစပြုသူနှင့် အဆုံးအဖြတ်ပေးသူအဖြစ် ခရစ်တော်အကြောင်းဖြစ်သည် (ဟေဗြဲ ၁2,2ပေတံ) üဘုရားဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်း (ဗျာ 3,14ပထမနှင့်နောက်ဆုံး၊ အစနှင့်အဆုံးအဖြစ်) (ဗျာဒိတ် ၂2,13Scion (ယေ. ၂)၊3,5ထောင့်ကျောက်တုံးအဖြစ်၊1. ပေတရု။ 2,6ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​တန်​ခိုး​တော်​နှင့်​ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​ဉာဏ်​ပ​ညာ​တော်​အ​နေ​ဖြင့် (1. ကော။ 1,24) လူကြီးအဖြစ်üလူမျိုးအပေါင်းတို့၏ဆန္ဒများ (ဟဂ်. 2,7).
သစ္စာရှိပြီး စစ်မှန်သောသက်သေ ခရစ်တော်အကြောင်းဖြစ်သည် (ဗျာ 3,14) အရာအားလုံး၏အမွေဆက်ခံသူ (ဟေဗြဲ။ 1,2) ကယ်တင်ခြင်း၏ဦးချို (လု. 1,69လောကအလင်း (ယော.8,12) အသက်ရှင်သောမုန့် (ယော. 6,5၁) ယေရှဲ၏အမြစ် (ဟေရှာ. 11,10) ငါတို့၏ကယ်တင်ခြင်း (လု. 2,30) ဖြောင့်မတ်ခြင်း၏ နေရောင် (မာလ. 3,20) အသက်၏နှုတ်ကပတ်တော် (1. ယော. ၁း၁) သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် မြဲမြံသောဘုရားသခင်၏သားတော် (ရော. 1,4) - စသဖြင့်ပေါ့။
ပေါလုဤသို့ရေးသားခဲ့သည်– “ယေရှုခရစ်တည်းဟူသော ချထားသောအုတ်မြစ်မှတပါး အဘယ်သူမျှ မချနိုင်။1. ကော။ 3,11) ယေရှုခရစ်သည် ဧဝံဂေလိတရား၏အခြေခံအုတ်မြစ်၊ အဓိကအကြောင်းအရာ၊ သမ္မာကျမ်းစာကို မဆန့်ကျင်ဘဲ အခြားမည်သို့ဟောပြောနိုင်မည်နည်း။
ယေရှုက F ကိုပြောခဲ့တယ်üယုဒလူတို့ နားထောင်ကြလော့၊ “သင်တို့သည် ထာဝရအသက်ကို ရသည်ဟု သင်တို့ထင်မှတ်လျက် ကျမ်းစာ၌ စုံစမ်းလျက်၊ ငါ့အကြောင်းကို သက်သေခံသောသူဖြစ်၏၊ အသက်ကိုရအံ့သောငှါ ငါ့ထံသို့ မလာချင်ကြ” (ယော. 5,39-40) ။
ခရစ်ယာန်များကိုကြွေးကြော်သောသတင်းစကားüနှင့်ဟုခေါ်ကြသည်ဘုရားသခငျ့နိုငျငံတျော၌ထာဝရအသက်အကြောင်း, ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပါ။ ထာဝရကယ်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကိုစစ်မှန်သော T. မှတဆင့်သာရနိုင်သည်။üယေရှုခရစ်တော်တည်း။ သူသည်ထိုနယ်မြေ၏ဘုရင်ဖြစ်သည်။
ယောဟန်ဤသို့ရေးသားခဲ့သည်– “သားကိုငြင်းဆိုသောသူသည် အဘလည်းမရှိ၊ သားကိုဝန်ခံသောသူသည် အဘလည်းရှိ၏” (1. ဂျို 2,23) တမန်တော်ပေါလုက တိမောသေထံ ဤသို့ရေးခဲ့သည်– “အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့စပ်ကြားတွင် ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းရှိပြီး၊ ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့ကြားတွင် ဖျန်ဖြေပေးသူဖြစ်သည့် ယေရှုခရစ်သည် ကိုယ်ကိုကိုယ်စွန့်တော်မူသောသူဖြစ်သည်။üအချိန်တန်လျှင် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်း၊1. တိ၊ ၂:၅-၆)။
ဟီး 2,3 ကျွန်ုပ်တို့သတိပေးခံရသည်– “…သခင်ဘုရား၏တရားဟောခြင်းမှအစပြု၍ ကြားနာသောသူတို့သည် ငါတို့၌တည်သော ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းကြီးကို မလေးစားပါက မည်သို့လွတ်မြောက်နိုင်မည်နည်း။ ကယ်တင်ခြင်းသတင်းတရားကို သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်က ဦးစွာကြေငြာခဲ့သည်။ü၎င်းသည်ခမည်းတော်ထံမှယေရှု၏ကိုယ်ပိုင်သတင်းစကားဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကယောဟန်ကိုရေးခဲ့တယ် üသားတော်အကြောင်း သက်သေခံခဲ့သည်– “ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးတော်မူသည်ဟူသော သက်သေခံချက်ဟူမူကား၊ ဤအသက်သည် သားတော်၌ရှိ၍၊ သားတော်၌ရှိသော အကြင်သူသည် အသက်ကိုရ၏၊၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်မရှိသောသူမည်သည်ကား အသက်ကိုရလိမ့်မည်မဟုတ်။1. ဂျို 5,11-12) ။
Johannes မှာ 5,22 ၂၃ အထိ၊ ယောဟန်သည် သား၏အရေးပါမှုကို တစ်ဖန်အလေးပေးဖော်ပြသည်– “အဘသည်မည်သူ့ကိုမျှ တရားမစီရင်သော်လည်း၊ üထိုသူအပေါင်းတို့သည်ခမည်းတော်ကိုရိုသေသည်နည်းတူ၊ သားတော်ကိုမရိုသေသောသူသည်သားတော်ကိုစေလွှတ်တော်မူသောခမည်းတော်ကိုမရိုသေသောသူဖြစ်၏ üယေရှုခရစ်တော်အကြောင်း။ ဟေရှာယဤသို့ပရောဖက်ပြုခဲ့သည်– “ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် Ren မိန့်တော်မူသည်– ကြည့်ရှုလော့၊ ဇိအုန်မြို့၌ ငါသည် ကျောက်တုံးတစ်တုံးကို ဇိအုန်မြို့၌ ချထားပြီး၊ အဖိုးတန်၍ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သော၊ ယုံကြည်သူမည်သည်ကား ရှက်ကြောက်မည်မဟုတ်” (ဟေရှာယ ၂၈:၁၆)။ ဇူးရစ်ခ်ျကျမ်း)။
ယောဟန်သည်ထောင်ထဲသို့ရောက်သည်နောက်၊ ယေရှုသည်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူလျှင်၊üဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် နီးပြီ။ နောင်တရ၍ ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်လော့” (မာကု ၁:၁၄-၁၅)။
သခင်ယေရှုယူဆောင်လာသည့်ဤ ospel ၀ ံဂေလိတရားသည်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲစေသည့်တန်ခိုးပါသောသတင်းစကားဖြစ်သည်။ .ဝံဂေလိတရား üreqüနားထောင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းသာမကနောက်ဆုံးတွင်လူတိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်üသူ့ကိုငြင်းပယ်သူဆရာဝန်လုပ်ပါüရှင်သန်ရန်။
ဧဝံဂေလိတရားသည် “ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ကို ကယ်တင်သောဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်” (ရောမ ၁း၁၆)။ ဧဝံဂေလိတရားသည် လုံးဝခြားနားသောအဆင့်တွင် အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင် ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။üနားထောင်ပါ သတင်းကောင်းမှာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာသောအခါကျွန်ုပ်တို့နှင့်လုံးလုံးလျားလျားအမွေရမည့်အမွေရှိသည်။ ၎င်းသည်ယခုပင်ငါတို့နှင့်ဆိုင်သောအားတက်ဖွယ်ဝိညာဉ်ရေးရာအဖြစ်မှန်ကိုဖိတ်ကြားခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ပေါလုသည် ဧဝံဂေလိတရားကို “ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရား” ဟုခေါ်သည်။1. ကော 9:12), “ဘုရားသခင်၏ဧဝံဂေလိတရား” (Rom. 15:16) နှင့် “ငြိမ်သက်ခြင်းဧဝံဂေလိတရား” (ဧ. 6:15) ။ သခင်ယေရှုမှစတင်၍ j ကိုစတင်ခဲ့သည်။üခရစ်တော်၏ပထမ ဦး ဆုံးကြွလာခြင်း၏တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်ကိုအာရုံစူးစိုက်။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏အငြင်းပွားဖွယ်အမြင်ကိုပြန်လည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန်။
The Jesus သူ üယုဒပြည်နှင့် ဂါလိလဲပြည်၏ ဖုန်ထူသောလမ်းများတစ်လျှောက် လှည့်လည်သွားလာကာ ယခုတွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်သော ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏လက်ယာတော်ဘက်တွင် ထိုင်ကာ “အာဏာစက်အကြွင်းမဲ့အုပ်စိုးရှင်” ဖြစ်တော်မူကြောင်း ပေါလု သွန်သင်ခဲ့သည် (ကော ၂း၁၀)။
ရှင်ပေါလု၏အဆိုအရသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် first ၀ ံဂေလိတရားတွင်“ ပထမ” ဖြစ်သည်။ သူတို့ Schl ဖြစ်ကြသည်üဘုရားသခင်ရဲ့ အစီအစဉ် (1. ကော ၁၅:၁-၁၁)။ ဧဝံဂေလိတရားသည် သတင်းကောင်း füဆင်းရဲသောသူနှင့်ညှဉ်းဆဲခြင်းကို rüချစ်တယ် ဇာတ်လမ်းမှာရည်မှန်းချက်ရှိတယ်။ အဆုံး၌, ဥပဒေအောင်ပွဲပါလိမ့်မယ်, အာဏာပါလိမ့်မယ်။
ထိုးထိုးလက်ရှိပါတယ် üသံချပ်ကာလက်သီးကျော်အောင်ပွဲခံ။ မကောင်းသောအရာသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏လမ်းတော်သို့လမ်းလွဲသွားသည်။ ၎င်းမှာခရစ်ယာန်များအနေဖြင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွေ့ကြုံခံစားနေရသည်။
ရှင်ပေါလုသည် against ၀ ံဂေလိတရား၏ဤရှုထောင့်ကိုအလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်üကောလောသဲအသင်းသားများနှင့် ပတ်သက်၍“ သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောခမည်းတော်ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သင်တို့ကိုဝမ်းမြောက်စေခြင်းငှါ၊üသန့်ရှင်းသူတို့၏အမွေကိုလင်းစေတော်မူ၏။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမှောင်မိုက်တန်ခိုးမှကယ်တင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ချစ်သောသားတော်၏နိုင်ငံတော်သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ünden"(col. 1,12-14) ။
Füခရစ်ယာန်အားလုံးအတွက် the ၀ ံဂေလိတရားသည်အဖြစ်မှန်နှင့်အနာဂတ်ဖြစ်သည်üအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်။ ထမြောက်တော်မူသောခရစ်တော်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ üအချိန်၊ နေရာနှင့်ဤတွင်ဖြစ်ပျက်သမျှအားလုံးသည်ပြိုင်ဘက်fဖြစ်သည်ür ခရစ်ယာန်များ။ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ချီမြှောက်ခြင်းခံရသောသူသည် အလုံးစုံသော တန်ခိုးအာဏာ၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သည် (ဧ. 3,20-21) ။
သတင်းကောင်းမှာယေရှုခရစ်၏မြေကြီးအသက်တာ၌အတားအဆီးအားလုံးရှိသည် üကျော်ပြီ လက်ဝါးကပ်တိုင်လမ်းသည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ခဲယဉ်းသော်လည်းအောင်နိုင်သောလမ်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ရှင်ပေါလုသည် kept ၀ ံဂေလိတရားကိုအကျဉ်းချုပ်ဖြင့်ဤသို့နိဂုံးချုပ်နိုင်သည်üလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံတော်မူသော ယေရှုခရစ်မှတပါး သင်တို့တွင် အဘယ်အရာကိုမျှ မသိနိုင်။" (1. ကော။ 2,2).
ယေရှုသည်ဂါလိလဲပြည်၌ထင်ရှား လာ၍ ospelဝံဂေလိတရားကိုထက်သန်စွာဟောပြောသည့်အခါသူသည်အဖြေတစ်ခုကိုစောင့်ဆိုင်းခဲ့သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ထံမှအဖြေတစ်ခုကိုလည်းသူမျှော်လင့်ပါသည်။
သို့သော်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရန်ယေရှု၏ဖိတ်ကြားချက်သည်အချည်းနှီးမဖြစ်ခဲ့ချေ။ သခင်ယေရှု၏ခေါ်တော်မူခြင်း füဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်ရောမအုပ်စိုးမှုအောက်၌ခံစားခဲ့ရသောတိုင်းပြည်ကိုထိုင်။ သတိပြုမိစေသည့်အထင်ကရနိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်အံ့ဖွယ်အမှုများဖြင့်လိုက်ပါခဲ့သည်။
၎င်းသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ဆိုလိုရင်းကိုယေရှုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ယေရှုခေတ်ရှိဂျူးများသည် F ကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်üဒါဝိဒ်နှင့်ရှောလမုန်ခေတ်၏ဘုန်းအသရေကိုမိမိလူတို့အားပြန်ပေးလိမ့်မည်üရက်။ Oxford ပညာရှင် NT Wright မှရေးသားခဲ့သည့်အတိုင်းသခင်ယေရှု၏သ ၀ ဏ်လွှာသည်နှစ်ဆတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာသူသည် j တစ်ဘုံမျှော်လင့်ချက်ကိုယူခဲ့သည်üdischer superstate ရောမထမ်းပိုးကိုပစ်ချürde နှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုသို့လှည့်။ liber ၀ ံဂေလိတရားအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မျှော်လင့်ချက်ကိုသူသည် ၀ ိညာဉ်ရေးကယ်တင်ခြင်း၏သတင်းစကားအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
"ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် နီးပြီ၊ သူပြောနေပုံရသည်၊ သို့သော် ၎င်းသည် သင်စိတ်ကူးထားသည့်အရာမဟုတ်" (NT Wright, Who Was Jesus?, p. 98)။
ယေရှုသည် မိမိ၏သတင်းကောင်းကြောင့် လူတို့ကို ထိတ်လန့်စေခဲ့သည်။ “အများတို့သည် ရှေ့ဦးစွာသောသူမူကား နောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။9,30).
ငိုကြွေးခြင်းနှင့်အံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိလိမ့်မည်üအာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုပ်မှစ၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၌ ပရောဖက်အပေါင်းတို့ကို မြင်သောအခါ၊ သင်တို့သည် နှင်ထုတ်ခြင်းကို ခံရကြ၏။” (လုကာ ၁၃း၂၈)။
ကြီးစွာသောညစာစားပွဲ,fဖြစ်ခဲ့သည်ür အဲဒီမှာ အားလုံး (လု. ၁4,16စာ-၂၄)။ တပါးအမျိုးသားများကိုလည်း ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ တစ်စက္ကန့်သည် တော်လှန်သူမဟုတ်ပေ။
နာဇရက်မြို့သားဒီပရောဖက်ဟာအချိန်အတော်များများပုံရသည်üနူနာနှင့် Kr မှတရားမဲ့ဖြစ်ရန် rüလောဘကြီးသောအခွန်ကောက်ခံသူများအတွက် ppeln - တစ်ခါတစ်ရံ၌ပင် füမုန်းသောရောမဖိနှိပ်မှု rücker ။
ယေရှုယူဆောင်လာသည့်သတင်းကောင်းသည်သူ၏သစ္စာရှိဂျေ၏မျှော်လင့်ချက်အားလုံးနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ünger (လု. 9,5၁-၅၆)။ အနာဂတ်တွင် သူတို့စောင့်မျှော်နေသောနိုင်ငံတော်သည် သူ၏လုပ်ငန်းတွင် တက်ကြွစွာတည်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ယေရှု အထပ်ထပ်အခါခါပြောခဲ့သည်။ အထူးဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုပြီးနောက် “ဘုရားသခင်၏လက်ချောင်းများအားဖြင့် နတ်ဆိုးများကို ငါနှင်ထုတ်လျှင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် သင်တို့ဆီသို့ရောက်ပြီ” ဟုပြောခဲ့သည်။ (လု. 11,20) တစ်နည်းဆိုရသော် သခင်ယေရှု၏ဓမ္မအမှုတော်ကို မြင်သူများသည် အနာဂတ်၏ပစ္စုပ္ပန်ကို မြင်ကြသည်။ အနည်းဆုံး နည်းလမ်းသုံးသွယ်ဖြင့် ယေရှုသည် လက်ရှိမျှော်လင့်ချက်များကို ဇောက်ထိုးပြောင်းပြန်သည်-
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် သန့်ရှင်းသောဆုကျေးဇူးဖြစ်သည်—အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေသောဘုရားသခင်၏အုပ်စိုးမှုတည်းဟူသောသတင်းကောင်းကို ယေရှုသွန်သင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် “သခင်ဘုရား၏ ကျေးဇူးတော်နှစ်” ကို စတင်ခဲ့သည်။ (လု. 4,19; ဟေရှာ. ၆ ရက်နေ့1,1စာ-၂)။ ဒါပေမယ့် Müဆင်းရဲသောသူ၊ သူတောင်းစား၊ ဆိုးသွမ်းသူကလေးများနှင့်နောင်တရသောအခွန်ခံများ၊ နောင်တရသူ၊ အက်ဖ်ür အနက်ရောင်သိုးများနှင့်ဝိညာဉ်ရေးပျောက်ဆုံးနေသောသိုးများကိုမိမိကိုယ်ကိုသူတို့၏သိုးထိန်းအဖြစ်ကြေညာခဲ့သည်။
ယေရှု၏goodဝံဂေလိတရားသည်လည်း၊üစစ်မှန်သောနောင်တတရားကိုနာကျင်စွာသန့်စင်စေခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ထံချဉ်းကပ်ရန်အသင့်ရှိသူများ။ ဒီစိတ်ရင်းမှန်နဲ့နောင်တယူအက်စ်ünder wüဘုရားသခင့အတွက် grossz rdenüသွားလာနေသော သားသမီးများအတွက် မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကို ရှာဖွေပြီး “ဝေးကွာနေဆဲ” အချိန်တွင် မြင်သော ဖခင်ကောင်းကို ရှာပါ (လု. ၁၊5,20) ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသည် စိတ်နှလုံးထဲမှပြောသောသူမည်သည်ကား၊üကြင်နာသနားတော်မူပါ” (လု ၁8,13) စိတ်ရင်းမှန်နဲ့သူသညျဘုရားသခငျ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာထင် tmdüကြားနာခြင်း würde. “တောင်းလျှင် ပေးလိမ့်မည်။ ရှာလျှင်တွေ့လိမ့်မည်၊ ခေါက်လျှင်ဖွင့်လိမ့်မည်” (လု. 11,9) ။ F ကိုüကမ္ဘာလောက၏လမ်းစဉ်များမှယုံကြည်ပြီးသွားသောသူများအတွက်၎င်းသည်သူတို့ကြားနိုင်သမျှအကောင်းဆုံးသတင်းဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှု၏ ospel ၀ ံဂေလိတရားသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံနှင့်တူနေလျှင်ပင်သခင်ယေရှုယူဆောင်လာသည့်နိုင်ငံတော်၏အောင်ပွဲကိုဘာမျှမတားဆီးနိုင်ဟုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာဘုံ würde သည်ခါးသော၊ အကြင်နာမဲ့သောခုခံမှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်၊ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင် wüက rde ü.ရာဝတီüအစစ်အမှန်အာဏာနှင့်ဘုန်းအသရေအောင်ပွဲ။ ခရစ်တော်ကသူ၏ J ကိုပြောခဲ့သည်ünag: "လူသားသည် မိမိဘုန်းအသရေနှင့် ကောင်းကင်တမန်အပေါင်းတို့သည် ကြွလာသောအခါ၊ ဘုန်းကြီးသောပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ ထိုင်၍၊ လူမျိုးအပေါင်းတို့သည် ရှေ့တော်၌ စုဝေးကြလိမ့်မည်။ သိုးထိန်းသည် ဆိတ်နှင့် သိုးကို ခွဲသကဲ့သို့” (မဿဲ ၂5,31-32) ။
ယေရှု၏သတင်းကောင်းသည် "ယခုဖြစ်နေပြီ" နှင့် "မဖြစ်သေး" အကြားတွင် ပြင်းထန်သောတင်းမာမှုတစ်ခုရှိသည်။ နိုင်ငံတော်၏ဧဝံဂေလိတရားသည် ရှိနှင့်ပြီးသားဘုရားသခင်၏အုပ်စိုးမှုကို ရည်ညွှန်းသည်– “မျက်စိကန်းမြင်၍ ခြေမစွမ်းသောသူသည် လမ်းလျှောက်တတ်၏။ နူနာစွဲသောသူတို့သည် ကင်းစင်၍ နားပင်းသောသူတို့သည်ကြားရ၊ သေလွန်သောသူတို့သည် ထမြောက်ကြကုန်၏။ ဆင်းရဲသောသူတို့သည် ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောတတ်၏” (မ. 11,5) သို့သော် ယင်း၏ ရလဒ်အပြည့်အစုံမှာ နိုင်ငံတော်သည် “မဖြစ်သေး” သေးပေ။ülling ဆဲအံ့ဆဲဆဲဖြစ်ခဲ့သည်။ the ၀ ံဂေလိတရားကိုနားလည်ခြင်းဟူသည်ဤအချက်နှစ်ချက်ကိုနားလည်ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်ဘုရင်၏လူမျိုးတော်၌နေထိုင်ပြီးကတိထားရာပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်း၊
ခရစ်ယာန်သာသနာပြုရှင်ပေါလုသည် great ၀ ံဂေလိတရား၏ဒုတိယလှုပ်ရှားမှုကြီးကိုစတင်ရန်ကူညီခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယုဒနိုင်ငံမှအလွန်ရာစုနှစ်အလယ်ပိုင်းရှိအဆင့်မြင့်ခေတ်မီသည့်ဂရိ - ရောမကမ္ဘာအထိပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ပြောင်းလဲခြင်းခံရသောခရစ်ယာန်များကိုရှင်ပေါလုသည်နေ့စဉ်ဘဝ၏ ၀ တ္တရားမှတဆင့် ospel ၀ ံဂေလိတရား၏အလင်းရောင်ကိုညွှန်ပြသည်။ သူသည်ဘုန်းထင်ရှားသောခရစ်တော်အားချီးမွမ်းစဉ် the ၀ ံဂေလိတရား၏အကျိုးဆက်များနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။
တစ်ယူသန်ဆန်သောဆန့်ကျင်မှုများကြားမှပေါလုသည်အခြားခရစ်ယာန်များအားယေရှု၏ဘဝ၊ သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြသည် -
“သင်တို့သည်လည်း ရှေးရှေးက တစ်ပါးသူ၏ မကောင်းမှု၌ ရန်ငြိုးဖွဲ့ခဲ့ဖူးသူဖြစ်၍ ယခုအခါ၌ သင်တို့ကို သန့်ရှင်း၍ အပြစ်ကင်းစင်၍ အပြစ်ကင်းစင်စေခြင်းငှာ၊ ယခုတွင် ကိုယ်တော်သည် မိမိ၏ သေခြင်းတရားဖြင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်စေတော်မူပြီ၊ ခိုင်ခံ့သောစိတ်နှင့် ကင်းလွတ်၍ ကောင်းကင်အောက်၌ရှိသော သတ္တဝါအပေါင်းတို့အား ဟောပြောသော ဧဝံဂေလိတရားကို မျှော်လင့်ခြင်းမှ မလွှဲမရှောင်ဘဲ၊ ငါပေါလုသည် မိမိကျွန်ဖြစ်ပြီ” (ကော. 1,21-23) ။
ပြန်လည်သင့်မြတ်သည်။ စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသော။ ကျေးဇူးတော်။ ရွေးနှုတ်ခြင်း။ ခွင့်လွှတ်ခြင်း။ အနာဂတ်မှာသာမကဘဲဒီနေရာမှာပါ။ ဒါကရှင်ပေါလု၏ospelဝံဂေလိတရားကိုဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်ဂျိုဟန်တို့ကစာဖတ်သူများအား ဦး ဆောင်သည့်အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သည် (ယော။ ၂၀၊ ၃၁) သည်ခရစ်ယာန်များ၏နေ့စဉ်ဘဝအတွက် g ၀ ံဂေလိတရား၏အတွင်းစွမ်းအားကိုထုတ်ပေးသည်။ ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် the ၀ ံဂေလိတရားကိုအတည်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ပေါလုသည်ဝေးလံသောယုဒနယ်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအဖြစ်အပျက်များသည်လူအားလုံးကိုမျှော်လင့်စေသည်။
“... ငါသည် ဧဝံဂေလိတရားကို မရှက်ပါ။ ရှေးဦးစွာ ယုဒလူများနှင့် ဂရိလူတို့ကို ကယ်တင်သော ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ အကြောင်းမူကား၊ ယုံကြည်ခြင်းမှလာသော ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ခိုင်ခံ့သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။” (ရော. 1,16-17) ။
တမန်တော်ယောဟန်သည်dimensionဝံဂေလိတရားကိုအခြားသောရှုထောင့်မှထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်။ ယေရှုကိုမည်သို့ပြသနည်း။üချစ်တော်မူ၏” (ယော၊ ၁9,26)၊ သိုးထိန်းနှလုံးသားရှိသူ၊ ကြောက်ရွံ့ရိုသေသောလူများကို နက်ရှိုင်းစွာချစ်မြတ်နိုးသော ချာ့ခ်ျခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကို သတိရမိသည်။
“ယေရှုသည် ဤစာအုပ်၌မရေးထားသော အခြားသော နိမိတ်လက္ခဏာများစွာကို တပည့်တော်များရှေ့၌ ပြုတော်မူခဲ့၏။ ယေရှုသည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သင်တို့သည် နာမတော်၌ အသက်ကိုရစေခြင်းငှါ၊ (ယော ၂၀:၃၀-၃၁)။
the ၀ ံဂေလိတရားကိုယောဟန်၏တင်ဆက်မှုသည်“ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်ရန်” ဟူသောမှတ်သားလောက်ဖွယ်ဖော်ပြချက်၌အဓိကဖြစ်သည်။
ယောဟန်သည် the ၀ ံဂေလိတရား၏အခြားရှုထောင့်ကိုအံ့ဖွယ်နည်းဖြင့်သရုပ်ဖော်သည်။ ယောဟန်သည်မေရှိယ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှုတော်ဆောင်ခြင်းအကြောင်းကိုရှင်သန်နေသောမှတ်တမ်းကိုဖော်ပြထားသည်။
တစ် ဦး ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးospelဝံဂေလိတရားကို
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် တန်ခိုးကြီးသော လူထုတရားဟောဆရာဖြစ်တော်မူသော ခရစ်တော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံပါသည်။ (ယော. 7,37စာ-၄၆)။ ယေရှုကို နွေးထွေးပျူငှာစွာ မြင်သည်။ သူ့ဖိတ်စာကနေ "လာကြည့်!" (ယော။ 1,39) သံသယရှိသောသောမတ်စ်သည် သူ၏လက်တွင် အမည်းစက်၌ လက်ညှိုးကိုထည့်ရန် စိန်ခေါ်ချက်အထိ (ယော. ၂၀၊၂၇)၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဇာတိပကတိဖြစ်လာပြီး ကျွန်ုပ်တို့တွင်နေထိုင်ခဲ့သူကို မမေ့နိုင်သောနည်းဖြင့် ပုံဖော်ထားသည် (ယော. 1,14).
လူတွေက ယေရှုကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုကြပြီး သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့အတွက် သူနဲ့ တက်ကြွစွာ ဖလှယ်ကြတယ်။ (ယော. 6,5-၈)။ တူညီတဲ့ပန်းကန်ထဲက စားသောက်ရင်းနဲ့ သူ့ဘေးမှာ အိပ်နေကြတယ်။3,23-26) ။
သူ့ကိုယ်သူ ကြော်ထားတဲ့ ငါးအတူတူစားတာကို မြင်တာနဲ့ ကမ်းနားကို အရမ်းချစ်ကြတဲ့ သူတွေ (ယော ၂း၂)1,7-14) ။
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့်၊ သူ၏စံနမူနာနှင့် ကိုယ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသော ထာဝရအသက်နှင့် ဧဝံဂေလိတရားသည် မည်မျှရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား သတိပေးသည် (ယော. 10,10) ဧဝံဂေလိတရားဟောရန် မလုံလောက်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား သတိပေးသည်။ ငါတို့လည်း အသက်ရှင်ရမယ်။ တမန်တော်ယောဟန်က ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးသည်– ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အားဝေမျှရန် ကျွန်ုပ်တို့၏စံနမူနာမှ အခြားသူများကို အောင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရေတွင်းမှာ ယေရှုခရစ်ကိုတွေ့တဲ့ ရှမာရိအမျိုးသမီးက (ယော. 4,27စာ-၃၀) နှင့် Maria von Mandala (ယော. ၂၀၊၁၀-၁၈)။
တပည့်တော်များအား F ကိုပေးခဲ့သောနှိမ့်ချကျွန်ဖြစ်သောလာဇရု၏သင်္ချိုင်းဂူတွင်ငိုကြွေးသူသည်üSse, ဆေးကြောလွန်းယနေ့အသက်ရှင်သည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ၏ရောက်ရှိခြင်းကိုပေးသည်။
ငါ့ကိုချစ်သောသူသည်ငါ့စကားကိုနားထောင်လိမ့်မည်။ ငါ့မည်းတော်သည်ထိုသူကိုချစ်တော်မူသည်။ ငါတို့သည်လည်း၊ သူဆီသို့ကြွ။ နေရာချမည်။ သင်တို့စိတ်နှလုံးကိုမကြောက်နှင့်။üလက်စားချေခြင်းမပြုပါနှင့်” (ယော. ၁4,23, 27) ။
ယနေ့ ယေရှုသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သူ၏လူတို့ကို တက်ကြွစွာ ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ သူ၏ဖိတ်ကြားချက်သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ အားတက်စရာဖြစ်သည်- "လာကြည့်ကြ!" (ယော။ 1,39).